Inkantolo ixegise imibandela yebheyili yemeya emisiwe
INKANTOLO inqume ukuthi uMeya Zandile Gumede angabuyela emsebenzini wakhe. Isithombe: Motshwari Mofokeng/African News Agency(ANA)
PHUMELELE NXUMALO | August 8, 2019
KUPHENDULEKE imikhuleko yabalandeli bakaNkk Zandile Gumede inkantolo yeMantshi eThekini ithambisa imibandela yebheyili emacaleni enkohlakalo esolwa ngawo.
UGumede besekuphele izinyanga ehlabe ikhefu emsebenzini njengokomyalelo we-ANC kanti sekunenhlasi yethemba kubalandeli bakhe ukuthi ngemuva kwesinqumo senkantolo usengabuyela emsebenzini.
Inkantolo ngoLwesine inqume ukuthi uGumede angabuyela emsebenzini ngombandela wokuthi ngeke axhumane nofakazi emacaleni asolwa ngawo enkohlakalo nokukhwabanisa kwithenda ka-R208 million yokuqoqa udoti kumasipala weTheku.
UGumede ongaphandle ngebheyili ka-R50 000, ubevele enkantolo nesekela likaSomlomo kumasipala weTheku uMnuz Mondli Mthembu nabanye abasolwa abangu-8. Omunye umsolwa ubengekho ngenxa yokubanjwa umkhuhlane. Imigomo yebheyili yangaphambilini yayithi uGumede angakwazi ukuxhumana nomphathi kamasipala kuphela.
Ekhuluma nezinkumbi zabalandeli bakhe abebengaphandle kwasenkantolo uthe angeke awuvumele umasipala weTheku uwele ezandleni ezingalungile ngoba kukhona abagaqele ithuba lokuwuthatha lo masipala.
UGumede wamiswa emsebenzini wakhe ngenyanga kaJuni kulandela izinsolo zokubandakanyeka enkohlakalweni ethinta ithenda ka-R208 million.
Ubuholi be-ANC KwaZulu-Natali ngoLwesibili bunqume ukuthi kwelulwe ukumiswa kukaGumede esikhundleni sakhe. UNobhala we-ANC KwaZulu-Natal, uMnuz Mdumiseni Ntuli uveze ukuthi basadinga esinye isikhathi ukudingida udaba lukaGumede nabanye abaholi abamisiwe ezikhundleni zabo kulesi sifundazwe. Ngesikhathi kubuyekezwa ibheyili yakhe enkantolo kunqunywe ukuthi uGumede angaxhumana nobuholi obuphezulu kuMasipala ngaphandle kwalabo abangofakazi ecaleni lakhe.
Umshushisi u-Advocate Ashika Lucken utshele inkantolo ukuthi uphenyo lusaqhuba kahle kanti izincwadi zokucela abanye ofakazi enkantolo (subpoena) ezingu-25 kwezingu-280 azikenziwa.
Ummeli kaGumede u-Advocate Jimmy Howse ucele ukuthi baziswe ngemininingwane ethinta amacala onke abekwe wona. Icala lihlehliselwe u15 kuJanuwari.
Usizi bebona abazali befa phambi kwabo
‘Ningayi esikoleni nasemsebenzini’
Iphoyisa lizidubule nentombi